I-beta yesithathu ye-tvOS 11.4 kunye ne-watchOS 4.3.1 ngoku ziyafumaneka kubaphuhlisi | Ndisuka mac
Kunye nokukhutshwa kwe-beta yesithathu yabaphuhlisi be-macOS 10.13.5, abafana baseCupertino basebenzise nasemva kweminisungula ii-betas zabaphuhlisi bezinye iinkqubo zokusebenza I-Apple inentengiso: i-iOS, i-tvOS kunye ne-watchOS. Ngelixa i-iOS kunye ne-tvOS zikhuphe i-beta yesithathu ye-11.4, i-beta ye-watchOS, inkqubo yokusebenza ye-Apple Watch, yinombolo 4.3.1.
Kwi-tvOS 11.4, asifumananga nto intsha yokuqaqambisa, njengoko kusenzeka nge-macOS 10.13.4, kuba kumanqaku ohlaziyo, iApple ikhankanya kuphela ukuba bugs zilungisiwe eziye zafunyanwa okoko kwasungulwa ingxelo yangaphambilini ye-tvOS 11.3, uhlaziyo olungakhange lusizisele iindaba ezininzi malunga neempawu zokuqaqambisa.
Ukuba ungumphuhlisi kwaye ufake ii-betas zangaphambili, kufuneka ulinde ukufumana isaziso esihambelanayo okanye usinyanzele Ngaseto lwefowuni yakho. Ukuba akunjalo, kuya kufuneka uqhagamshele i-Apple TV kwikhompyuter yakho kunye neXcode kunye nesatifikethi esihambelanayo, ukhuphele kwaye ufake i-beta ehambelanayo. Njengakwi-macOS beta ekhoyo ngoku, le nguqulelo yokugqibela inokuthi ifike kamva kule nyanga, kwiintsuku ezimbalwa ngaphambi kweWWDC.
Kodwa, nabafana abavela eCupertino nabo Ndikhuphe i-beta yesithathu, kunye nabaphuhlisi, beewotsOS 4.3.1, Inguqulelo ethi, njengazo zonke iinkqubo ezisebenzayo ezisungulwe yiApple izolo, isinike kuphela ukuphuculwa kokusebenza kunye nezisombululo kwiincukuthu ezincinci ezifunyenwe oko kwasungulwa inkqubo yangaphambili yeApple Watch. Ukuphehlelelwa kwayo, njenge-iOS 11.3, i-tvOS 11.3, i-macOS 10.13.5 icwangciselwe ukuphela kwale nyanga, kwiintsuku ezimbalwa ngaphambi kwe-WWDC, apho iApple izakusibonisa khona iindaba eziza kufika kwiinguqulelo ezilandelayo zeenkqubo zayo zokusebenza.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » I-beta yesithathu ye-tvOS 11.4 kunye ne-watchOS 4.3.1 ngoku ziyafumaneka kubaphuhlisi